झण्डै डेढ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यि युवतीले के गर्दैछिन ? – Sanjal Nepal
Homeरोचकझण्डै डेढ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यि युवतीले के गर्दैछिन ?
November 30, 2020 admin रोचक 2779
निकै नै सुन्दर एक युवतीको बाथरुम भिडियो संसारभर भाइरल बनेको छ । ति युवतीले बाथरुममा छिरेपछि के-के गरिन्, त्यो सबै एक गोप्य क्यामेरामा कैद गरिएको थियो ।के छ भिडियोमा ?एक युवती बाथरुममा प्रवेश गर्छिन् । ढोका बन्द गर्छिन् । त्यसपछि पालैसँग तल-माथिको दुवै कपडा खोलेर झुण्ड्याउँछिन् । अब उनको शरीरमा ब्ल्याक वान पिस ड्रेस मात्र बाँकी रहन्छ । त्यो पनि खोल्न लागेजस्तो गर्छिन् ।
त्यत्तिकैमा उनले एक्कासी क्यामेरामा हेरेर भन्छिन्, ‘तपाईं मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नि होइन ? सायद केहीको प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईं जे का लागि प्रतिक्षा गर्नुभएको हो, त्यो नहुँदासम्म कुर्नुहुन्छ नि होइन ?तर त्यो हुँदैन । केही हुँदैन । सबैभन्दा पहिले म यो ट्याब (धारो) बन्द गर्छु । यहाँ पानी खेर गइरहेको छ ।’ अनि उनले पानी खेर गइरहेको धारो बन्द गर्छिन् । जनचेतना फैलाउने उनको यो शैली गज्जबको छ ।
थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
सम्बन्ध विच्छेद भएको एक वर्ष पछि पूर्व पत्नीलाई यस्तो भिडियो पठाएपछि…
January 22, 2021 admin रोचक 4812
काठमाडौँ । सम्बन्ध विच्छेद भएको एक वर्ष पछि एक पुरुषले पूर्व पत्नीलाई सताउन नराम्रा भिडियो पठाएको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ । सम्बन्धमा रहेको बेलामा खिचिएका तस्बिर र भिडियो पूर्व पत्नीलाई पठाएका थिए । श्रीमान श्रीमतीबीचको
August 2, 2020 Administer रोचक, समाचार 24803
November 2, 2020 admin रोचक 8758
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच शिष्टाचार वा म्यानरर्स जस्ता औपचारिकता किन आवश्यक छ ? तर श्रीमान श्रीमतीबीच सानो तिनो झगडा, मनमुटाव हुने कारण यहि नै हो । आपसमा अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नाले अन्जानमा
LEX 18 agenda conversation: Job club (404307)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (378930)
Hello world! (314414)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (289172)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (104943)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (104870)